Mahatso-po ny Fo Masin’i Jesoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fo vato lasa fo nofo (Ez 36, 26). Izay no endriky ny fiainam-baovao ao amin’i Kristy, entanin’ny Fanahy Masina. Ny fo vato moa dia tsy mangoraka, tsy miraharaha, tsy mihontsina, tsy taitra, tsy rototra, tsy mitsetra, manao be marenina, donto, mafy, mihidy, manilikilika... Ny fo nofo kosa : mamondrona, misokatra, malemy paika, mailaka, malady, kinga, mora mifandray, miantra...
Tsy fanatsarana na fampivoarana toe-po amam-panahy no ataon’Andriamanitra amin’izany fa fanovana fiainana hatrany ifotony mihitsy. Ny fandraisana ny Fanahin’Andriamanitra ao amin’ny tena no tsiambaratelo raketin’izay fiovana tanteraka sy maharitra izay. Ny Fon’i Jesoa no zary fonenana sy ianteherana. Andriamanitra Fitiavana rahateo no ambarany. « Izy Tompo no tia mialoha » (1 Jn 4, 9), tamin’ny alalan’i Kristy : tolotra ho antsika (Rm 8, 32, Ef 5, 2). Ary tsy misy fetra io fitiavana io. Didy vaovao no mifandraika amin’izany, dia ny didim-pitiavana (Lk 22, 20).
Amin’ny ankapobeny, tsikaritra ao amin’ny Evanjely fa be nafana fo sy tia vavaka ny Jody. Saika mbola fo vato anefa ny fon’izy ireo fa tsy fo nofo. Tsy fantany tsara ny fon’Andriamanitra. Tsy afa-namindra fo sy niantra ary nanasoa tanteraka ny hafa izy fa nanilika na nanafay ny mpanota sy ny vahiny ary ny fahavalo. Mpahary sy Mpitsara, ho azy, Andriamanitra. Nanjavozavo koa ny fahazahoany ny « namana », ao amin’ny didy hoe « tiava ny namanao tahaka ny tenanao » (Lv 19, 18). Nahitsin’i Jesoa anefa izay fisainana izay, tamin’ny ohatra nomeny sy ny fampianarany: momba ilay Samaritanina tsara fanahy (Lk 10, 20-37), ny zaza mpandany sy ny ondry very (Lk 15)... Ary dia hoy i Kristy tamin’ny mpianany, teo an-katoky ny fanaovany sorona ny tenany ho fanekem-pihavanana ho antsika : « Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo toy ny nitiavako anareo » (Jn 15, 12).
Sahiny notondroina mazava hoe « didiko » ilay didim-pitiavana natolony. Sady vaovao manko izy io : avy aminy, no mitaky na mitarika fiainam-baovao : ao aminy. Ary dia nisy ny efa nanandrana izany fiombonanam-po lalina izany ireo mpianany. Anisan’izay i Joany : nampirona ny lohany teo an-tratran’ny Tompo. Toraka izany i Tomà : vaky vava hoe « Tompoko sy Andriamanitro », rehefa tojo ny Fon’i Jesoa maty sy nitsangan-ko velona (Jn 20,28-29). Ary hoy i Paoly, tamin’ny kristianina tany Efezy : « Honina ao am-ponareo anie i Kristy, amin’ny alalan’ny finoana, ary hiorim-paka ao amin’ny fitiavana anie ianareo ». (Ef 3, 17). Dia rava hatreo ny fianteherana amin’ny lalàna taloha izay namatotra. Zary olona afaka isika.
Ao amin’ny Fon’i Jesoa ihany àry, rehefa zohina, no sehatra «hahatakarantsika ny sakan’ny fitiavan’i Jesoa, mbamin’ny lavany sy haavony ary hahaliny, izay mihoatra ny azo sainina rehetra» (Ef 3, 18). I Jesoa mihitsy aza moa no nanoso-kevitra mivantana antsika mba hitodika amin’ny fony, raha nilaza hoe « mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho » (Mt 11, 29). Ary dia ny fontsika no hitsaran’i Jesoa antsika. Tsy ankasitrahiny ny fanamarinan-tena ivelany fanaon’ny farizianina, mahatonga azy ireo ho tia niseho ho mpanara-dalàna kanefa ny fony misamatsamaka, mizarazara, mampisaraka ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Vokatry ny fitiavana, avy amin’ny Fanahy Masina : lasa mahita an’Andriamanitra isika rehefa manatona olombelona. Midika izay fa mihamazava ny fontsika (Ef 1, 18). Porofo fa velona ao amintsika ny tsimok’Andriamanitra (1 Jn 3, 9). Koa tsy matahotra ny hirotsaka hampanjaka ny rariny eo amin’ny fiarahamonina izay tarihin’ny fitiavana tsotra, ao am-po tsotra.